Rallies, Speeches and Music: Images From Zimbabwe’s Electoral Campaigns
Addmore Muhomba (left) signs a pledge on July 26 in Harare, Zimbabwe to vote and to behave peacefully during the July 30 general elections in Zimbabwe. Previous elections in Zimbabwe have been marred by widespread violence and accusations of corruption, so many Zimbabweans hope that Monday's vote will be the first fair elections in more than a generation.
As Zimbabwe prepares for historic general elections on July 30 – the first in the country’s history without former President Robert Mugabe’s name on the ballot – Global Press Journal journalists captured in photographs the parties’ and candidates’ campaigns. Here is a collection of images showing how campaign season looks.
Fortune Moyo Senior Reporter
In the weeks leading up to the July 30 general elections in Zimbabwe, posters of the various candidates for president and other positions were posted around Bulawayo, Zimbabwe, such as this poster of President Emmerson Dambudzo Mnangagwa.
Supporters of the Zimbabwe African National Union-Patriotic Front (ZANU-PF) drove around Mutare, Zimbabwe on July 20, encouraging Zimbabweans to vote for all the party’s candidates The truck is displaying an image of President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, head of the ZANU-PF.
Women waiting in line on July 20 in Mutare, Zimbabwe to attend a rally to hear President Emmerson Dambudzo Mnangagwa.
Supporters of President Emmerson Dambudzo Mnangagwa and the ZANU-PF party waited in line on July 20 in Mutare, Zimbabwe to hear him speak at a rally.
Supporters and members of the Movement for Democratic Change Alliance, the main opposition bloc in Zimbabwe, drove throughout Bulawayo on July 20 to attract support for Nelson Chamisa, the head of the MDC-Alliance. Chamisa is widely considered to pose the greatest challenge to President Emmerson Mnangagwa.
Thokozani Khupe addresses a rally on July 21 at Dingumuzi Stadium in Plumtree, Zimbabwe. She is one of the 23 candidates for president in the July 30 general elections, and she represents the Movement for Democratic Change – Tsvangirai party.
Thokozani Khupe and her supporters pose for a photo after her rally on July 21 at Dingumuzi Stadium in Plumtree, Zimbabwe.
Various artists performed at a concert in Harare, Zimbabwe on July 26 that encouraged Zimbabweans to vote in the July 30 elections. More than 5 million Zimbabweans have registered to vote in the historic elections.
The conductor of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services band performs at the first Zimbabwe Peace Festival, in Harare on July 27. The event was created to pray for political tolerance and peace in the run-up to the July 30 general elections.